Aluminum cnc machine, nemazvo machine - Anebon
Tinonzwisisa kukosha kudenha chinzvimbo kwakabva uye ichi- kungoita miganhu chii zvinokwanisika. Tinoshandira tolerances sezvo zvakasimba sezvo ± 0.01 paminiti 100MM kubva divi kunyange tighter tolerances zvinobvira kugadzikana chaizvo, zvakasimbisa mugiredhi engineering zvinhu. Nemazvo CNC machine psac zvikamu zvinogona ichavakirwa vatengi tsika akaratidza zvinhu.
5 Sekaiichi machine
Nemazvo Turning zvinoriumba
Die vachikanda Mechanical Parts
Die Kudzingwa Phone Parts
Best Metal tsikwa Parts
Fast tsikwa Parts
Metal tsikwa Part
Metal tsikwa Parts
Anebon rakaumbwa muna 2010. chikwata yedu kushandisa akagadzira, kugadzirwa uye rokutengesa zviri Hardware indasitiri. Uye tabuda ISO 9001: 2015 advertising.
Tine akura, vakarongeka uye yakakwirira mureza michina kubva kuJapan, kusanganisira siyana CNC azvikuya uye akatendeukira michini, pamusoro mukuyi, zvemukati uye bani mukuyi, Wedmls, Wedmhs etc.. Uye tinewo zvemberi yokuedzwa michina. Parts vane tolerances kusvikira ± 0.002mm kunogona anotsigirwa.
Our History Industries Customer Reviews Chazvakanakira Our
PERCISION, kuita, uye rakavimbika
kufa Kudzingwa zvikamu , aruminiyamu Kudzingwa, aruminiyamu kufa Kudzingwa zvikamu , aruminiyamu kufa kuraswa , vachikanda zvikamu , aruminiyamu kufa chakakandirwa ,